လိုးကားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တို့၏အင်တာနက်ကိုအားလုံးတိရစ္ဆာန်အပရိသတ်များအစုအဝေးထုတ်ဖို့လုံးငတ်သူတို့သည်စုဝေးစေစောင့်ကြည့်ကသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစီးရီးနဲ့ဖတ်ရှုသူတို့အကြိုက်ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတာကတြန္းနှင့်နည်းပညာများကိုတီထွင်နေကြပါတယ်။ချို့အကြီးအကျယ်အငတ်ထောင်ချောက်များအတွက်၎င်းတို့၏ပရိသတ်များမိမိတို့ဖန်တီး။ အားလုံးသူတို့အားကြီးမားတဲ့ tits၊တင်းကျပ်စွာ asses နှင့်အလိုတော်နှင့်အမှုအရာမရှိအကြောင်းပြချက်မရှိ။ တြန္းဖြစ်စေခြင်းငှါအများဆုံး sexualized ပုံစံများကိုအသုံးပြု၊ဒါကြောင့်အများကြီးရှိပါတယ်အရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာကိုဗဟိုပြု။, နောက်နှစ်အတွက်လွတ်လပ်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာရှင်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူများကဖန်တီးနှင့်ပန်ကာအနုပညာသရုပ်ဖော်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတြန္းဇာတ်ကောင်အတွက်ယုတ်အခြေအနေ၊နည်းပညာနှင့်လည်းကျွမ်းကျင်မှုတို့၏အကောင့်တွေဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာစေဖို့လုံလောက်တဲ့သူတို့ကိုငါထွက်ထားရော်လိင်ဂိမ်းများအတွက်သင်ခံစားနိုင်သည့်သင့်ရဲ့ချစ်တြန္းငယ်။
သို့သော်၊ကျွန်တော်သာအကြောင်းတြန္းရော်ဂိမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ ငါတို့သည်လည်းအများကြီးရှိသည်မူရင်းလိုးကားဂိမ္းဤစုဆောင်းခြင်းအတွက်။ ထိုသူအချို့တို့သည်အတူလာသောပုံပြင်များဖြစ်ကြသည်၊ဒါကြောင့်ကောင်းစွာကျမ်းစာဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဒါကြောင့်အကြိုက်ဖက်ကာမ်ားႏွသူတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်၏ခေါင်းစဉ်ကီးေတြန္းစီးရီး။ အဲဒီတစ်ဖျော်ဖြေအတွေး။ အစားရှိခြင်းတြန္းရော်လိင်ဂိမ်းများ၊ဘယ်လိုအကြောင်းအရီးမှုတ်သွင်းကနေတစ်မူရင်းလိုးဂိမ်း။ ဒါပေမဲ့ဘေးချော်သွားတယ်! ပြန်ရကုန်အံ့အဖြစ်အကြောင်းပြောနေတာလိုးကား။ မှတပါးသောအချက်ကိုအများကြီးရှိသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော variated အကြောင်း၊ငါတို့သည်လည်းပူဇော်အရည်အသွေး။, အားလုံးအဆိုပါဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတွက် HTML၅။ ဆိုလိုသည်ယုံဂရပ်ဖစ်နှင့်လက်တွေ့ကျဂိမ်းအတွေ့အကြုံ။ ဤအသစ်ဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ပါတယ်အပေါ်မည်သည့်မျိုး၏ကိရိယာလို့ရတဲ့အထိ။ နှင့်အရာအားလုံးအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အခမဲ့။ ပြောဆိုကြကုန်အံ့ပိုပြီးအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအတွက်အောက်ပါအပိုဒ်။
မကြာသေးမီကတိုးတက်မှုအတွက်အရေးများလိင်ဂိမ်းများရည်ရွယ်ကြောင်းပိုပြီးအင်တာနက်ပေါ်ရှိလူများရွေးချယ်ညမ်းဂိမ်းများကျော်ဗီဒီယိုညစ်ညမ်းသည့်အခါသူတို့လိုချင်တဲ့အကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ပိုလွယ်ကေနဗီဒီယိုကိုအွန်လိုင်းဂိမ်းအတွက်တဦးတည်းထက်အလိုးနယ်ပယ်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလိုးသားကာတွန်း၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်တာအကြားခြားနားချက်ကိုကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုနှင့်ဂိမ်းပျော်မွေ့။ အထူးသဖြင့်ကတည်းကအစုဂိမ်းများတဦးကဲ့သို့သင်တို့အပေါ်မှာရှာတွေ့လိုးကားဂိမ်းများဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနား။ ငါရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်၊ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးတြန္းမှုတ်သွင်းဂိမ်းနှင့်မူရင်း။
အကားျလာနှင့်အတူဒါကြောင့်အများအပြားနာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်ၾကီးေတြန္းနှင့်အတူအချို့သောယင်းမှပိုပြီးထင်ရှားနှင့်တွဲလိမ့်မည်ဟူသောပီတိအံ့သြသေဆုံး-ခဲယဉ်း otaku။ လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာယင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အ Kasumi။ အားလုံးပြီးနောက်ဤနှစ်၊လူအဆဲအတူအစွဲအတင်ပါးနှင့်ပေါင်၏အထင်ကယင်းမှသေဆုံးသို့မဟုတ်အသက်ရှင်လျက်။ နိုင်မင်းအတွက်သူမ၏ဒါကြောင့်အများအပြားဂိမ်းများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်အပါအဝင်စာမျက်နှာများ simulators။ ဒါပေမယ့်အများကြီးရှိပါတယ်အခြားအငယ်မည်အတွက်ပျော်မွေ့။, ကျနော်တို့နှင့်အတူလာညမ်းရော်ဂိမ်းများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းတအပိုင်းအစ၊ညဦး၊နဂါး၊အစွန်းချွတ်၊Inuyasha၊ပင်ဂန္ထဝင်တြန္းစီးရီးအဖြစ်ရတနာသို့မဟုတ်သင်္ဘောလ။
ထိုအခါသင်ရှိသည်သောမူရင်းလိုးဂိမ်း၊အရာအများစုကြိမ်အနည်းငယ်ပိုမိုပြင်းထန်သောနှင့်အစွန်းရောက်။ တချို့ကလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သေားအတွက်မူရင်းလိုးဂိမ်းငါတို့၏ဆိုက်ကို၏အကြောင်းနှင့်သင်ျ loli။ အဲဒီနှစ်ခုဖြစ်သေားကြသည်ရောစပ်အတူတကွသာသမီး-ဖေဖေလိင်ဂိမ်းများငါတို့၏ဆိုက်ကို၏။ အခြားဂိမ်းအကြောင်းကျနော်တို့အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းလာနဂါးနှင့်အတူလိင်အရေးယူနှင့် tentacle။ ကျွန်တော်ပင်ရှိသည်လိုးရှိကြသည့်အတွက်သင်ခံစားနိုင်ရူးစွန့်စားနှင့်စိန်ခေါ်မှုဖှေအတွက်ကြီးမားသောမြေပုံ။, ကျွန်တော်တို့တောင်ကဒ်စစ်တိုက်ခြင်းငှာပြိုင်ကွင်းထဲမှာဂိမ်းအရာအတွက်သူရဲကောင်းများကနေကုန်းပတ်ကြသည်ၡမ်ားတြန္းမိန်းကလေးများနှင့်အတူအားလုံးသည်အမျိုးမျိုး။
Yuri၊Yaoi နှင့် Futanari လိုးဂိမ်းများ
ငါတို့သည်လည်းဂိမ်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အမျိုးမျိုးအပြား။ သို့သော်၊အမှုအရာအနည်းငယ်ကွာမှကြွလာသောအခါဤသည်။ လိုပုံ yuri ဂိမ်းများ၊မြားသောလာမယ့်အတူလိင်ပုံပြင်များနှင့်မိန်းကလေးမိန်းကလေးအရေးယူ၊ပိုခံစားရသောအားဖြင့်အထီးအဖွဲ့ဝင်များ၏။ တချိန်တည်းမှာပင်၊အ yaoi ဂိမ်းများလက်တွေ့များအတွက်ရည်ရွယ်ထိုယောက်ျားတွေလိင်၊အင်္ဂါလိင်လိင်အရေးယူ၊ပိုပြီးတန်ဖိုးအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကိုငါတို့သဆိုက်၏။ သို့သော်၊လူတိုင်းကိုချစ်ငါတို့ futanari။ လူတိုင်းသည်လိုမြင်မှအချို့သောကျား bender လှုပ်ရှားမှုအတွက်၊အထူးသဖြင့်အကြောင်းဂိမ်းများများမှာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အန္တစိတ်ကူးယဉ်။, နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးမိန်းကလေးဇာတ်ကောင်နှင့်အမြား reimagined ဖြစ်တြန္းငယ်နှင့်အတူဗဟိုအတွက်ဒီဂိမ်း။ ကျနော်တို့ရှိသည်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားစိတ်ကူးယဉ်နှင့် fetishes သင်သူမ၏နှင့်အတူဤ။ ကိုယ့်အပေါ်ကိုရောက်ဆိုက်နှင့်ထိုသူတို့ပျော်မွေ့!
တဦးတည်းအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးမှကြွလာသောအခါအဆိုပါဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အကြောင်းသူတို့ရဲ့-သဟဇာတ။ ကောင်းစွာ၊သင်သိသင့်သောအတိုင်းဂိမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအတွက်လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ် HTML၅၊အရာယခုအခါနည္းပညာအားလုံးအွန်လိုင်းအကြောင်းလက်လှမ်းအားလုံးထုတ်ကုန်များပေါ်မှာ။ သင်လိုအပ်သမျှကိရိယာရဲ့ခေတ်မီမလုံလောက်ပြေးဖို့အစု။ ဒီဂိမ္းကစားသို့တိုက်ရိုက်၊နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အဘယ်သူမျှဒေါင်းလုပ်။, စတင်မှတဆင့်ရှာဖွေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းကိုအသုံးပြုအများအပြားလှန်လှောကြည့်ရှုကိရိယာတွေကိုဖွင့်ချသင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရှာတွေ့ဂိမ်းအပည္ဆိုင္ရာည။ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့တွေ့ရှိ၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်အထိကစားခလုတ်နဲ့တပြင်လုံးကိုအရာမွာအတွက်တက်စက္ကန့်။ အသာဗီဒီယိုကြော်ငြာသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်လိမ့်မည်နေစဉ်အဆိုပါဂိမ်းကိုအကုန်တင်ပါ။ တခါတပြင်လုံးကိုအရာသည်တင်ဆောင်တက်၊သငျသညျနိုင်လိမ့်မည်ကစားရန်ဂိမ်းပင်လျှင်သင်သွား။ အားလုံးအားလုံးအတွက်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အံ့သြဖွယ်အချိန်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ သို့သော်အသိပေးစာယူသောအကျွန်ုပ်တို့အားကစားပြိုင်ပွဲရုံအဖြစ်စွဲလမ်းအဖြစ်တိရစ္ဆာန်အကြောင်းမှုတ်သွင်း။